venus1688: ကျားနဂါး ဘယ်လိုကစားသလဲ?
Dragon Tiger ဆိုတာများသောအားဖြင့် Asian ကစားသမားတွေကို အဓိကအားဖြင့်ဆွဲဆောင်နေတဲ့ ကစားနည်းဖြစ်ပြီးတော့ အထူးသဖြင့် Online Casino တွေမှာဆိုရင် အပြင်မှာလိုမဟုတ်ပဲ ပိုပြီးမြန်မြန်ဆန်ဆန်ကစားနိုင်ပြီးတော့ Dealer နဲ့လဲ အချိန်နဲ့တပြေးညီ Live ကစားနိုင်တဲ့ ကစားနည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကစားနည်းမှာတော့ ကစားသူတွေက ဒိုင်နဲ့ယှဉ်ပြီးကစားရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ပြောရရင်တော့ သူ့ရဲ့ကစားနည်းက Baccarat နဲ့ဆင်တူပါတယ်။ ကစားသူတွေက ဘယ်ဘက်အိမ်ကပိုပြီး ကဒ်တန်ဖိုးကြီးမလဲဆိုတာကို ခန့်မှန်းရမှာပါ။ တစ်ချို့ကြတော့လဲ ဒီကစားနည်းကို Casino war ကစားနည်းနဲ့နှိုင်းကြပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုရင် Dragon ဘက်ကိုရော Tiger ဘက်ကိုရော ကဒ်တွေဝေပြီးရင် အပိုကဒ်ထပ်ပြီးမဆွဲတော့လို့ပါ။ ကစားနည်းကိုအသေးစိတ်လေး ဆက်ပြီးလေ့လာလိုက်ကြရအောင်!
ကစားဖို့ဆိုရင် ကစားသူတွေက ပွဲမစခင်မှာ လောင်းကြေးကို Dragon ပေါ်မှာဖြစ်ဖြစ် Tiger ပေါ်မှာဖြစ်ဖြစ် ဒါမှမဟုတ်2ဖက်လုံးပေါ်ခွဲပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ် ထားရပါတယ်။ ဒီ2အိမ်အပြင်ကို သရေ(Tie) ပေါ်မှာလဲ လောင်းကြေးတင်နိုင်ပါသေးတယ်။ ပြီးရင်တော့ Dealer က2အိမ်လုံးအတွက် လှန်ပြီးတော့ ဝေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကစားနည်းမှာတော့ ဒီထက်ပိုပြီးလုပ်စရာမရှိတော့ပါဘူး။ ဝေလိုက်တဲ့ကဒ်ရဲ့ ပေါင်းခြင်းတန်ဖိုးအပေါ်မှာမှုတည်ပြီးတော့ များတဲ့အိမ်က အနိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လဲ သိရမယ့်စည်းမျဉ်းလေးတွေတော့ရှိပါတယ်။ Ace(A) ကဒ်တွေကို Low card လို့သတ်မှတ်ပြီးတော့2အိမ်လုံးက တန်ဖိုးအတူတူကျမယ်ဆိုရင် သရေလို့သတ်မှတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါအပြင့်ကို ဘာ Special Rule မှ ထူးထူးခြားခြားကြီးမှတ်နေစရာတော့မရှိတော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့်အရမ်းကိုရိုးရှင်းပြီး အရမ်းကိုလွယ်ကူတာကြောင့် ကစားသူအသစ်တွေအတွက်ရော အတွေ့အကြုံရှိပြီးသား ကစားသူတွေအတွက်ရော နာမည်ကြီးနေလျက်ရှိတာပါ။
ကစားသူတွေကတော့ Dealer ကဒ်မဝေခင်မှာ ရွေးချယ်စရာက Dragon (သို့) Tiger (သို့) Tie (သို့) နှစ်သစ်ရာ ခွဲပြီးလောင်းကြေးထပ် လို့ရပါတယ်။ ဝေလိုက်တဲ့ကဒ်တွေရဲ့တန်ဖိုးက အတူတူသာဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် Tie လို့သတ်မှတ်ပြီးတော့ Baccarat လိုပဲ သူ့ရဲ့ Payout နှုန်းက 8:1 ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လဲ Tie ပေါ်မှာလောင်းတာက Casino ဘက်ကို 32.7% ပေးထားတာဖြစ်တာကြောင့် တတ်နိုင်ရင်တော့ Tie ကိုရှောင်တာကောင်းပါတယ်။ ဒီလိုဆိုတော့ ရွေးချယ်စရာသိပ်မရှိတာကို မနှစ်သက်တဲ့ ကစားသူတွေအတွက်လဲ တခြားရွေးချယ်စရာတွေနဲ့ထပ်ပြီး မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ ဒီကစားနည်းမှာ အနိုင်အရှုံး လောင်းတာအပြင်ကို တစ်အိမ်ခြင်းစီအတွက် Big, Small, Odd, Even ထပ်ပြီးလောင်းနိုင်ပါသေးတယ်။ Big, Small ဆိုတာကတော့ ကိုယ်လောင်းမယ့်အိမ်ရဲ့ ကျဖဲပေါင်းခြင်းက7ထက်ကြီးမလား7ထက်ငယ်မလားဆိုတာကိုတွက်တာဖြစ်ပါတယ်။7ကွက်တိဆိုရင်တော့ ဒီလောင်းကြေးက ဆုံးရှုံးမှာပါနော်။ Odd, Even ကတော့ ကိုယ်လောင်းနဲ့အိမ်ရဲ့ပေါင်းလဒ်က စုံကိန်းလား မကိန်းလားဆိုတာလောင်းတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဆိုဒီလိုရိုးရှင်းလွယ်ကူတဲ့ကစားနည်းကို ကမ္ဘာအနှံ့က ကစားသူတွေနဲ့အတူတူ Casino တစ်ခုထဲရောက်သွားသလို ခံစားမှုမျိုးနဲ့ Live ကစားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ venus1688 ကိုလှမ်းခဲ့လိုက်ပါနော်!